प्रिय बबिता तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस !!! - नेपालबहस
सरकार संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत गराउने तयारीमा, विपक्षी पर्ख र हेरको अवस्थामा
भारतमा कोभिड–१९ बाट निको हुनेको दर ४१.६१ प्रतिशत : स्वास्थ्य मन्त्रालय
देशभर सडक सञ्जालको लम्बाइ ३४ हजार ३४७ किमी पुग्यो
आइएफसीले कोभिडबाट सिथिल नेपालका निजी क्षेत्रलाई सघाउने
कोरोनासँग जुध्न एडीबीले दियो ३० अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण
लागूऔषध र कौडाका सामानसहित पक्राउ
दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितको रिले अनसन
अब पनि लकडाउन नै ?
नेताहरूका लागि लैनाे गाई रहेकाे एमसीसीमा देउवाकाे हताराे किन ?
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, फेरि काममा सक्रिय हुने
नेपालमा काेराेना संक्रमितको संख्या ७ सय ८३ पुग्याे
गृहपृष्ठ विचार / बहस ब्लग/सामाजिक संजाल प्रिय बबिता तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस !!!
अक्टोबर 7, 2019
२० असोज काठमाडौं ।
मुत्यु उस्तै उस्तै तर !
मुत्यु पछीको मलामीको जमात
फरक देख्दै छु आज ।।।
ठाउँ उस्तै उस्तै तर !
ठाउँमा उभिएका मान्छेको भिड
फरक देख्दै छु आज ।।
चारैतिर दशैँको माहोल छ, तर बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर ६ को गाउँ तुल्सिपुर यतिबेला शोक मग्न भाको छ । मेरो आफन्त सारा इष्टमित्र लगायत सबै पिडामा छन् ।
२६–२७ बर्षको अल्पआयुमै तिमीले यसरी संसार छोडेर जालेउ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिराको छैन … म कसरी कल्पना गरौँ प्रिय भाउजु बबिता !!!
तिमीलाई म कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ कसरी लेखौ यी भावनाका कुरा हिजो मात्र बा बिनाको दशैं खल्लो छ, शिर्षकमा एउटा लेख लेखेका मेरा हात आज तिम्रो नाममा हार्दिक श्रद्धान्जली लेख्न हात थर्थराइ रहेका छन् । प्रिय भाउजु बबिता….
किन यस्तो गरेऊ तिमीले ? आखिर कारण के थियो ? किन तिमीले ति बुढी आमाको मुख हेरिनौ ? बाबाको आर्दशलाई किन बुझीनौ ? बालबच्चाको भविष्य किन सोचिनौ ? अनि हेर त जिवन भर सगै बाच्ने कसम खाएर वैवाहिक जिवनको यात्रामा कसिएको गाँठा किन एक्लै फुकाएर गयौ ? तिमीलाई कसैको माया लागेन ? आज यस्तै प्रश्न खेलिरहेको छ । प्रिय भाउजु बबिता………!!!!
राती सम्म अफिसको काम गर्दै गर्दा ठूल्दाजुसंग कुरा गरेको थियो । मन हिजो देखि चिसो भाको थियो । साहेत तिम्रो खबरले होला ,,,प्रिय….!!! हुन त, भविष्य कसले कहाँ देखेको छ र ? भोली के हुन्छ भनेर कसले नै भविष्यवाणी गर्न सक्छ र ? तर मलाई तिमीले यस्तो गरेउ भन्दा अझै नि विश्वास लागेको छैन् ।। प्रिय…,,,,,, !!!!!
तिमी हिडेको बाटो अनि तिमीले गरेका हजारौँ क्रियाकलाप आँखा अगाडी आइरहेको छ । हुन त तिमीसंग म त्यहि नजिक भइन् । तर भावना र आत्मियताले बहिनी नै भए पनि नाताले भाउजु पर्ने तिमीमा आँट हौसलाले म सधै खुशि थिए तर आज ति अबोध बालबालिकाको मनलाई जिवनभरको पिडा किन दियौ प्रिय…के तिमीलाई कसैको माया लागेन् ?
बर्दिया मेरो गाउँ अनि मेरै आफन्तको घटनाको थोरै शब्द मात्र हो यो। हो आज केही बोल्न न केही लेख्न सकिराको छैन । म के लेखौ के बोलौ न कुनै शब्द छ न कुनै वाक्य बस् ।। प्रिय तिमीले दाजुहरु, आफन्त, भाउजु, छोराछोरी, सासु, ससुरा लगायत ति बुढी आमाको मुख हेरेनौँ ? भन किन यस्तो गरेउ प्रिय ।।
सबैलाई दशैं लागेको छ । गाउँमा सबै खुशि थिए । तर सबैको खुशि एकाएक परिवर्तन भयौँ मात्र कारण तिम्रो अप्रिय खबरले ति बुढा आमा बा आफन्त अनि दाजुभाइ यता छोराछोरी अनि श्रीमानलाई … तिमीले कसैको मुख हेरेनौ !!आखिर किन यस्तो गरेउ प्रिय ?
मेरो कलम यसरी कहिले सम्म लेखेउ ? आजको यो घटनाले ठूलो मामाको छोरा शिवराज दादाको याद आयो, सपना बहिनीको याद अझै ताजै छ । यता पवित्रा भाउजु, हजुर आमा, कान्छो मामा, मेरो बाबा सारा आफन्त लगायत तिम्रो आत्माले संसार छोडेछ !! अनि यता चन्द्र दादाको साथ चटक्क छोडेर जान कसरी सकेउ प्रिय ।।
मेरो गाउँ सारै दुखित भाको छ, दशैंको महाअष्टमीका दिन तिमीले घर छोडेउ भनेदेखि ति बुढी आमाका आँखा रसाएका छन् । बुवाको टोपी शिरबाट जरेको छ । अबोध बालकको मम्मी शब्दले चसक्क सबैको मन गराएको छ । दाजुभाइ भाउजुका खुट्टा लरबराएका छन् ।
सारा देश विदेशका भएका हाम्रा आफन्तका आँखाबाट बलिन धारा आँसु खसेका छन् । यता तिम्रो जिवन साथी विदेशमा छट्पटाइ रहेको छ । प्रिय के गरेउ यस्तो ?
गाउँमा हिजो मात्र दशैंको माहोल आएको थियो । कमाउन गएका ति आफन्तहरु दशैं मनाउन घर आएका छन् । आज कसरी तिम्रो मृत शरिरमा सामिल हुने ? मैले धेरै प्रिय मान्छे गुमाएको छु । बर्षौदेखि र त मेरो मन कहिल्यै खुशि छैन ।
प्रिय भाउजु बबिता तिम्रो असामयिक निधन भएको खबरले हामी सबै आफन्त, परिवार अत्यन्तै मर्माहत भएका छौं। यस दुःखत घडीमा मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।। शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो सहानुभुती का साथ धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस भनी हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछौं।
…..!!! ……म आज निशब्द भाकी छु !!!!!
नोट : बर्दिया जिल्ला ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा छ तुल्सिपुरमा करिव २६–२७ बर्षको उमेरमा बविता सुनारले आत्महत्या गरेको घटनामा आधारित रहेर लेखिएको हो ।
अघिल्लो लेखनिस ला लिगा फुटबल : बार्सिलोनाले सेभिल्लालाई हरायो
अर्को लेखमहराको स्वास्थ्यमा समस्या, शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै
बर्दियाका कोरोना संक्रमित पुरुष कालीमाटीका व्यवसायी
कोरोना संक्रमण आशंकामा लालपुर पूर्णरुपले बन्द
बर्दियाको क्वारेन्टाइनबाट युवती फरार !
तरकारी बारीबाटै बिक्री हुन थालेपछि किसान खुशी
सुरक्षा दिन सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कुटिए
बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एक जना गम्भीर घाइते
शिक्षा / स्वास्थ्य1356
मेडिकल कलेज / अस्पताल915
विचार / बहस368